खाडी जानु रहर होइन
सराेज तामाङ सोमबार, भदौ २२, २०७७, ११:५४
काठमाडौं- आफ्नो उर्जावान उमेर खेलमा बिताइसक्दा पनि खेलेर के भयो त? भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने क्षण साह्रै दुःखद छ। सक्दासम्म त खेल्ने, खेल्न छाडेपछि के गर्ने? खेलाडीले यो चिन्ता गरेको लामो समय भयो, तर साथमिल्दो उत्तर पाएका छैनन्। त्यसैले त पलायन हुने खेलाडीहरुको संख्या थपिँदो छ।
खेलाडीका पलायनपछि लुकेका बाध्यता, रहर र भोगाइका कथाहरुमा देशको खेल ब्यवस्थाप्रतिको निराशा धेरै छ। खेल्दा खेल्दै पनि खेलाडीमाथि हुने नराम्रो व्यवहार, खेलाडीका नाममा पदाधिकारीको मोज, खेलमा लागिरहँदा पनि बाँच्न मुस्किल हुने आयस्ता, असुरक्षित भविष्य जस्ता कारण खेल चटक्क छाडेर विदेशिन्छन्।
नेपाली भलिबलमा लामो समय रहेकी खेलाडी निता शाहको अवस्था पनि अरु खेलाडीको भन्दा भिन्न भएन। भविष्यप्रतिको चिन्ताले उसैगरी सताइरह्यो। यसैले त सुखद बिदाइको आश गरिरहँदा पनि खेल जीवनका अन्तिम वर्षहरु सम्हालिन सकिनन्, र विदेशिइन्।
देशको लागि पदक जित्दा जति खुसी मिल्छ, त्यो भन्दा धेरै पीडा खेलिरहेको खेलाडीलाई खेल्न सक्दैनस् भन्ने नराम्रो व्यवहारबाट हुन्छ। जसले सुधारको अपेक्षा भन्दा बढी अपमानको श्रृङ्खला दोहोरिन्छ। यस्तै अवस्थ भोगिन् निताले पनि।
नेपाललाई बिच भलिबलमा थुप्रै पदक दिलाएकी उनीसँग भलिबलले दिएको चिनारीसँगै थुप्रै कष्टकर क्षण छ। मैदानबाट कोही जितेर जान्छन् त कोही हारेर। नितासँग जित्दा जित्दै हारेका त्यस्ता पलहरु छन्, जसले भलिबल नै त्याग्न बाध्य बनायो। खेल्दा खेल्दै पनि उमेरमाथिको प्रश्न, उपचारको लागि आर्थिक संकट झेल्दै २४ वर्ष भलिबलमा बिताएकी उनी अन्ततः साग खेलकुदको तयारीमा लागिसक्दा पनि छाडेर दुबई उडिन्।
निताले विपक्षी टिमसँगको प्रतिस्पर्धामा भन्दा कठिन अवस्था आफ्नै खेललाई बाधक बनिरहेका आफ्नैहरुसँग गरिरहिन्। अभावसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहिन्। अन्ततः जित मैदान बाहिर लग्ने गरी भयो। नेपाली खेल क्षेत्र पुनः अर्को खेलाडीको पलायनले पराजित भयो।
बंगलादेशको समुद्र किनारमा होस् या चीनको। त्यो बालुवामा विदेशी खेलाडीले हानेको सर्टभन्दा गरुङ्गो त पदाधिकारीको रुखो शब्द लाग्थ्यो। खेल्नुको विकल्प खोज्दा खोल्दै, सोच्दा सोच्दै आफैमा हराइरहन्थिन् उनी। विकल्पको खोजीले यसरी पिरोलिरह्यो कि अन्त्यमा मैदान छाडिन्।
पटक पटक सपना टुटेपछि
खेल्नु मात्रै ठूलो कुरा होइन रहेछ। खेलेर मात्रै केही हुने पनि होइन रहेछ। जब सपना र उद्देश्य भन्दा त ठूलो आवश्यकता बनिदिन्छ।
निता र कोपिला उप्रेतीको जोडी पोखरामा भएको बिच भलिबल प्रतियोगितामा दोस्रो भयो। सात प्रदेश र तीन विभागीय टिम रहेको यो प्रतियोगिता १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको छनोटसमेत थियो। प्रतियोगितामा विनिता बुढाथोकी र नेबिकाको जोडी पहिलो भएको थियो।
साग खेलकुदको बन्द प्रशिक्षण नजिकिँदै थियो। निता पनि साग खेल्छु भनेर लागिरहेकी थिइन्। तर खेल जीवनकै उत्तरार्धतिर पुग्दासमेत उनले आफ्नो भविष्य राम्रो देखिनन्। खेलाडी जीवनमा ढल्किँदै गरेको उमेर, पदाधिकारीको छुच्चो व्यबहारबाट घायल भइसकेकी थिइन्। यसरी कति दिनसम्म थेग्नु अब त भलिबल नै त्याग्छु भन्नेमा पुगिन्। दुबई मै काम गर्दै आइरहेकी चन्द्रकला थापासँगको सल्लाहपछि उनले २०७६ को साउनमा पासपोर्ट पेसिन्।
नभन्दै उनको भिसा आयो। सागको लागि बन्द प्रशिक्षण सुरु हुन १० दिन बाँकी रहँदा उनी दुबई उडिन्। उनी दुबई उडेपछि साग तयारीमा कोपिलाको जोडीमा मनिषा चौधरी भइन्।
दुबईमा रहेकी निता भन्छिन्, ‘जति गरे पनि केही नहुने देखेँ। खेलाडीलाई केही सुविधा छैन। विनिताकै अवस्था हेर्ने हो भने पनि प्रस्ट हुन्छ। संघ वा राज्यले के गरेको छ त? १–२ वर्ष अघि नै छोड्छु भन्ने लागेको थियो। तर साग खेलेर बिदा लिने सोचमा थिएँ। त्यो पनि पूरा भएन।’
दुबई उड्नु दुई दिनअघि मात्रै उनले टिमका साथीहरु र गुरुलाई आफू विदेश जाने सुनाइन्। भदौ ६ गते टिमका साथीहरुसँग सानो तिनो बिदाइ कार्यक्रम राखिन्। त्यो बिदाइको भावुकता अझै नितालाई याद आइरहन्छ। आफ्नो क्लबलाई जानकारी दिए पनि उनलाई डर थियो कतै मलाई रोक्ने त होइन?
‘मैले मेरो पुलिस क्लबलाई जानकारी दिएर नै आएँ। तर डर थियो मेरै पालामा केही एक्सन लिन्छ कि भन्ने। सागको उत्साह थियो। मन मार्ने इच्छा नहुँदा नहुँदै मार्नु पर्ने अवस्था आयो’, निता भन्छिन्।
पुलिसमा स्थायी जागिरे भए पनि खेल्न नसकेपछि अथवा टिमबाहिर रहेपछि खेलाडीले गर्ने भनेको त ड्युटी नै हो। ड्युटी नै गर्नु परे राम्रै पैसा कमाउने लक्ष्यसहित दुबई गएको उनको तर्क छ। अहिले उनी दुबईमा रोयल गार्डमा काम गर्छिन्। कामप्रतिको सम्मान र महिलालाई गर्ने व्यवहार निकै राम्रो भएको उनी सुनाउँछिन्।
उनी आफ्नो भविष्य बनाउन गइन्। के नेपाली भलिबलमा भविष्य नदेखेरै पलायन भएकी हुन् त? आवश्यकता थियो कि रहर? समस्या थियो कि पैसा कमाउने लोभ? खेलाडीमाथि तेर्सिने यिनै प्रश्न हुन्। यसको जवाफमा उनी भन्छिन्- ‘अहिलेसम्म भलिबल खेलाडीको इन्सुरेन्स छैन। घाइते हुँदा लाखौं खर्च हुन्छ। त्यो पैसा हामीसँग छैन। समस्याले च्यापेपछि विदेशिनुको विकल्प नहुँदो रहेछ। यहाँ आवश्यता पूरा गर्ने पैसा भएको नेपाली खेलाडी को छ र? आर्थिक अवस्था पनि राम्रै होस् भन्ने सोच सबैको हुन्छ नै।’
निता मात्रै हैन अहिलेसम्म विदेशिएका सबै खेलाडीको एउटै समस्या हो, आर्थिक अभाव। यसकै चपेटामा परेका धेरै प्रतिभावान खेलाडी खाडी मूलुकमा श्रम बेच्न बाध्य छन्।
‘आर्थिक अवस्था राम्रो होस्। कसैमाथि हात फैल्याउन नपरोस् भनेर लागि परिरहेको छु। बुढेसकालको साहाराको लागि मात्रै म आएकी हुँ’, निता भन्छिन्, ‘ठूलो देशहरुमा जानेहरुको लागि रहर होला तर हामी खाडी मूलुकमा आउनेहरुको लागि पीडा नै हुन्छ। खाडी मूलुक कोही रहरले आउँदैनन्। बाध्यता, समस्या र संकटकै कारण आएका हौं।’
खेल संस्कार बसेन
खेलाडीको मुख्य समस्या भनेको नै चोट हो। खेलिञ्जेल सरकार र संघले गुनगान गर्छ। तर घाइते हुँदा कसैले हेर्दैन। त्यतिकै छोडिदिन्छ। घाइते भएकै कारण निता पनि विदेशिइन्। यसको हेक्का न संघलाई छ न राज्यलाई। अहिले नेपाल भलिबल संघको शक्तिमा को आउने भन्ने लडाइँमै छ।
खुट्टामा चोट लागेपछि बिच भलिलबलमा लागेकी निता भन्छिन्, ‘एथ्लेटिक्सकी केसरी चौधरी जस्ता कीर्तिमानी खेलाडी त विदेशिदा राज्यले केही गरेन। अब अरुलाई के हेर्ला र? भलिबलमै केही गर्ने योजना थियो। तर केही गर्न सक्ने वातावरण नै थिएन। त्यसैले छोड्ने अवस्थामै पुगेँ।’
खेलाडी विदेशिदा के कारणले गए? भनेर न संघले खोज्ने गरेको छ। न राष्ट्र नै लागेको छ। वर्षौंदेखिको यो अनुत्तरित प्रश्न हो। सबै आफ्नो दुनो सोझ्याउने पक्षमै छन्। निता कै शब्दमा भन्दा केशरी चौधरी जस्ता कीर्तिमानी खेलाडी विदेशिदा कसले प्रश्न गरेका छन्? मेडल ल्याउँदा खेलाडीलाई पुरस्कृत गर्ने बाहेक अन्य केही कुरामा ध्यान दिएको छैन। खेलाडीको सेवा सुविधाको कुरै नगरौं। सामान्य बीमा समेत नहुँदा प्रत्येक वर्ष धेरै खेलाडीहरु चोट लागेपछि चरम आर्थिक संकटमै गुज्रिने गरेका छन्।
एउटा प्रतियोगितामा कीर्तिमान बनाएका खेलाडी अर्को वर्ष देखिँदैन। खेलाडीले खेल्ने हो। संघ अथवा राज्यले खेल्ने वातावरण मात्रै बनाउने होइन। एउटा खेलाडीको भविष्य सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पनि हो। अहिलेसम्म भलिबलमा खेलमा त्यस्तो संस्कार बसेको छैन। व्यावसायिकता कुरै नगरौं। संघ पैसा छैन भनेर सरकारको मुख ताक्छ। सरकार पन्छिन खोज्छ, अनि राम्रा खेलाडी नविदेशिएर के गरोस् त?
त्यो जित, त्यो मेडल
अछामबाटै भलिबल यात्रा तय गरेकी निताले २०५२ देखि २०७६ सम्म खेलिन्। विरेन्द्र शिल्डबाट यात्रा थालेकी उनले राष्ट्रिय स्तरका धेरै प्रतियोगिताको उपाधि जितेकी छिन्।
२०५७ सालबाट पुलिसमा स्थायी जागिरे बनेकी निता र चुडा खड्काको जोडीले २०६० सालमा बंगलादेशमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण बिच भलिबल कास्य पदक जितेको थियो।
ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा जित हात पार्दाको क्षण उनमा अहिले पनि ताजै छ। २०६२ मा चीनमा भएको तेस्रो एसियन बिच भलिबलमा कुबेतमाथि निकालेको जित होस् या २०६६ सालमा बंगलादेशमा भारतलाई पराजित गर्दा त्यो दिनहरु निताको लागि करिअरकै नबिर्सिने यादहरु हुन्। उनी भन्छिन्, ‘बंगलादेशमा भएको एसियन बिच भलिबल प्रतियोगिता मेरो लागि करिअरकै उत्कृष्ट प्रतियोगिता हो। जहाँ हामीले भारतलाई पराजित गर्दै कास्य पदक जितेका थियौं।’
२०६७ सालमा बंगलादेशमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय बिच भलिबल प्रतियोगिता र २०६८ मा श्रीलंकामा भएको साउथ एसियन बिच भलिबलमा पनि निता र चुडाको जोडीले कास्य पदक जितेको इतिहास छ।
सबै खेलाडीले निश्चित अवधि खेल्ने हो। कुनै न कुनै दिन बिदा हुनु नै पर्छ। तर जुनसुकै खेलाडीले आफ्नो सुखद बिदाइको अपेक्षा गरेको हुन्छ। तर लेजेन्ड खेलाडी जसले देशलाई केही दिएका छन्। उनीहरुलाई गलत्याएर निकाल्दा दुःख त लाग्छ नै।
‘राष्ट्रका लागि पदक दिलाउँदा गौरव त लाग्ने भइहाल्यो। भलिबल किन खेले? पश्चताप छैन। गौरव नै लाग्छ। तर पहिलेको जस्तो तेरो खेल भएन भन्दै गलत्याएर निकाल्ने गरेको छ, त्यसमा भने दुःख लाग्छ’, उनी थप्छिन्।
निताले भलिबलमै केही गर्छु भनेर लागि नपरेकी पनि होइनन्। भलिबलमै फरक भूमिकामा देखिनको लागि उनले प्रशिक्षकमा लेभल वान र टु कोर्ष पूरा गरिन्। सिकाउँदै आइरहेकी पनि थिइन्।
उषा भण्डारी जस्ता युवा खेलाडीको जग निताले नै बसाली दिइन्। ‘नयाँ आएका खेलाडीहरुलाई अभ्यास पनि गराएको थिएँ। मैले जानेका कुराहरु सिकाइरहेका हुन्थेँ। भलिबलमै प्रशिक्षकको भूमिकामा रहिरहन्छु भन्ने सोच थियो’, उनी प्रश्न गर्दै भन्छिन्, ‘नयाँ पुस्ताको हात थाम्ने लक्ष्यमा थिएँ। तर त्यो लक्ष्य किन तोडेँ? यसका कारणहरु के हुन्? यसको जवाफ संघ र राज्यले दिनुपर्छ।’
सरस्वतीहरुको खोजी हुनुपर्छ
भलिबल खेल नेपालमा सर्वाधिक खेलिने खेल हो। जुन सुकै स्थानमा जुनसुकै समयमा खेलिँदै आइरहेको भलिबल अहिले राष्ट्रिय खेल भएको छ। तर उपलब्धि भनेको राष्ट्रिय खेल हुनु बाहेक अरु केही छैन।
निता भन्छिन्, ‘जुम्लाको खेलाडी खेल्न चाहन्छ भने संघले तेरो त प्लेन भाडा नै महंगो हुन्छ, नखेल भन्छ। यस्तो छ अहिलेको अवस्था। भलिबल संघको एउटा उद्देश्य छैन। जसो तसो काम चलाउ छ।’
खेलाडी सबैको उस्तै अवस्था हुँदैन। अधिकांश खेलाडीको आर्थिक अवस्था कहाली लाग्दो नै छ। बिहान घाँस काटेर, धान रोपेर, मेलापात भ्याएर बचेको समयमा मात्रै खेल खेल्ने नेपालको परिपाटी छ। यस्तो अवस्थालाई चिर्दै सधैंभरी खेल मै व्यस्त हुने वातावरण बनाउन संघको के छ उद्देश्य अनि सरकारको नीति?
संघमाथि निताले उठाएको प्रश्नले सबैलाई झकझक्याउँछ नै। निता प्रश्न गर्छिन्, ‘सरस्वती चौधरी जस्ता अन्य सरस्वतीहरु पनि कैलालीमा छन् भनेर कसैले खोजेको छ कि छैन? खोज्नु पर्यो नि। खेलाडीको खोजी संघले गरेको छ?’